Iyini ipaki kazwelonke: izici nokubaluleka | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 21/04/2022 12:00 | Imvelo
Imvelo idinga isimiso sokuvikela esivikelwe umthetho ukuze ivikele izitshalo nezilwane. Kukhona izindawo zemvelo ezivikelekile zalokhu. Kulokhu, ake sibone iyini ipaki yesizwe. Lesi yisigaba sokuvikela esiphezulu esikhawulela imisebenzi ethile yabantu kuyo yonke indawo ezungezile.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi iyini ipaki, izici zayo nokubaluleka kwayo.
1 Iyini ipaki yesizwe
2 Imisebenzi yepaki kazwelonke
3 Ukubaluleka Kwamapaki Kazwelonke
4 Izici Zamapaki Kazwelonke
5 Izidingo zesigaba
6 umlando weNational Park
Uma sikhuluma nje, ziyizindawo ezivikelwe ezijabulela isimo esingokomthetho nesomthetho esinqunywa ngokwemithetho yezwe ezitholakala kulo. Lesi simo idinga ukuvikeleka nokulondolozwa kwezitshalo nezilwane ezicebile kanye nezinye zezici zayo ezikhethekile, okuvame ukuba yizindawo ezinkulu ezivulekile ezinciphisa ukunyakaza kwabantu. Ngoba injongo iwukuvikela, ukulondoloza nokuvimbela ukuwohloka kwesimiso semvelo esihlala kulezi zindawo, kanye nezici ezizinikeza ukuhlonza. Ukuze izizukulwane ezizayo zithokozele lezi zikhala.
Imisebenzi yepaki kazwelonke
La maphuzu alandelayo akhombisa ukubaluleka kwemisebenzi yeziqiwi ezinayo, yingakho uhulumeni uthathe izinqumo zomthetho ukuze abavikele.
Vikela izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo kanye nemvelo
Vikela izindawo zokuhlala ezisengozini
Isiqinisekiso sokuhlukahluka kwamasiko
Vikela izitshalo nezilwane ezisengozini
Vikela indawo yemvelo eyingqayizivele
Londoloza izimo zocwaningo ezifanele
Ukulondolozwa nokugcinwa kwezindawo ze-paleontological
Ukuvikelwa kanye nokongiwa kweziqiwi zemigede
Gwema ukushushumbiswa kwezinhlobo zezilwane ngokungemthetho
Gwema ukukhula ngokweqile
Ukubaluleka Kwamapaki Kazwelonke
Ukubaluleka kwepaki kazwelonke kungasukela ekuvikelweni nasekulondolozweni kwezindawo zayo zokuhlala kanye nemvelo noma izici ezikhethekile zezitshalo nezilwane zayo. Benza umnikelo omkhulu ekulinganiseni kwezinto eziphilayo, njengoba behlose ukuvikela izinhlobo zezitshalo nezilwane ezijwayelekile kakhulu noma ezihlukile kulezi zindawo. Kodwa kukhona okunye okubalulekile kwezomnotho, ngisho nakuzwelonke, esizokubona maduze.
Ukukhiqiza imali: Usuku nosuku baletha imali eningi emazweni ukuze bathole imiqondo efana ne-ecotourism kanye ne-adventure, izindawo zokukhempa, ukuqwala izintaba nokunye.
Khiqiza izinsiza zemvelo ezivuselelekayo: Iziqiwu eziningi zinamandla amakhulu okuthola imithombo evuselelekayo, kuhlanganise nokukhiqizwa kwamanzi nezinkuni ezinhle, futhi ukukhiqizwa kwazo kuyalawuleka.
Ukongiwa kwemithombo yemvelo: Lezi zinhlobo zezindawo ezivikelekile zivame ukunikeza ukuzinza kwesimo sezulu engxenyeni enkulu yabantu bomhlaba, ukusiza ukusimamisa isimo sezulu, inhlabathi kanye neminye yemiphumela yezinhlekelele zemvelo ezingase zibe khona.
Njengoba sesibonile, ukubaluleka kwamapaki emvelo avikelwe kuyadingeka futhi kubalulekile ukuze isizwe nomhlaba wonke uphile, kanye neplanethi yethu.
Nakuba inhlangano yomhlaba wonke yenze imizamo emikhulu yokuvikela izindawo zemvelo, ibhekene nezinsongo ezinkulu. Inani elikhulu lezilwane zasendle zisesimweni esisengozini, futhi kulinganiselwa ukuthi amaphesenti angu-50 anyamalele kule minyaka engu-40 edlule, ikakhulukazi ngenxa yokushushumbiswa okungekho emthethweni kanye nokuxhashazwa ngokweqile.
Izici Zamapaki Kazwelonke
Ipaki kazwelonke kufanele ibe nezici ezithile ezizobhekwa njengepaki kazwelonke, kufanele ibe nenani eliphakeme lemvelo, izici ezikhethekile kanye nobunye obuthile bezitshalo nezilwane zayo. Kufanele ithole ukunakwa nokunakekelwa okukhethekile okuvela kuhulumeni.
Izomenyezelwa njengepaki kazwelonke noma isiqiwu kazwelonke, kufanele iqukathe isistimu yemvelo emele. Indawo enkulu evumela ukuvela kwemvelo kwezinqubo zemvelo kanye nokungenelela okuncane komuntu enanini layo lemvelo, ngakho-ke ukubaluleka kokwazi ukuthi iyini ipaki yezwe ukuze banikeze ukugxila okufanele.
Ngokuphindaphindiwe ziye zaba isizinda sokugcina sezilwane ezisengozini yokushabalala. Zicebile ngezitshalo nezilwane futhi zinezakhiwo ezihlukile ze-geological. Kumelwe ivumele ukulingana okungokwemvelo kokuphila njengoba yayikhona ekuqaleni emhlabeni wethu. Inhloso yalezi ziqiwu ukuvikela izilwane zasendle kanye nokukhiqiza izindawo ezikhanga izivakashi, futhi i-ecotourism yazalwa ngaphansi kwalo mbono.
Ukuze indawo noma indawo icatshangelwe ngaphakathi kwepaki kazwelonke, kufanele ibe nezinye zalezi zimpawu ezilandelayo, okufanele zicaciswe njengoba zingahluka ngokuvumelana nemithetho noma izimiso zamazwe athile:
Ukumelwa: Imelela isimiso semvelo esiyingxenye yayo.
Ukwandisa: Yiba nendawo eyanele ukuvumela ukuziphendukela kwayo kwemvelo, ukugcina isimo sayo nokuqinisekisa ukusebenza kwezinqubo zamanje zendawo ezungezile.
Isimo sokulondoloza: Izimo zemvelo kanye nemisebenzi yezemvelo yiyona ehamba phambili. Ukungenelela komuntu kumagugu ako kumele kube yindlala.
Ukuqhubeka kwendawo: Ngaphandle kwalokho okuthethelelekayo, indawo kufanele ihlangane, ingabi nama-enclave futhi ingabi neziqephu eziphazamisa ukuvumelana kwe-ecosystem.
Ukuhlaliswa kwabantu: Izikhungo zasemadolobheni okuhlalwa kuzo azifakiwe, ngaphandle kwalokho okufanelekile.
Ukuvikelwa okusemthethweni: kufanele uvikelwe yimithetho kanye nohlaka lwezomthetho lwezwe lakini
Amandla okusebenza: Yiba nabasebenzi kanye nesabelomali ukuze bahlangabezane nezinhloso zokongiwa kwemvelo, futhi uvumele kuphela ucwaningo, imisebenzi yokufundisa noma yokwazisa ubuhle.
Isivikelo sangaphandle: Izungezwe indawo engamenyezelwa njenge-Foreign Reserve.
Iziqiwi zikazwelonke ngokuvamile zigadwa abaqaphi beziqiwu ukuze bavimbele izenzo ezingekho emthethweni njengokuxhashazwa kwezinhlobo zezilwane noma ukushushumbiswa okungekho emthethweni. Amanye amapaki kazwelonke angase abe yizindawo ezinkulu zomhlaba, kodwa kukhona nezindawo ezinkulu zamanzi, kungaba olwandle noma ezweni eliwela ngaphakathi kweziqiwi ezishiwo. Ziningi izibonelo ezinjalo emhlabeni.
umlando weNational Park
Nakuba kungewona umqondo njengoba siwazi namuhla, akhona amarekhodi esiqiwu semvelo esidala nakakhulu e-Asia, aboniswa yiHlathi laseSinharaja eSri Lanka, eliyisibonelo. yamenyezelwa ngokusemthethweni njengeNdawo Yamagugu Omhlaba ye-UNESCO ngaphambi kuka-1988.
Kwaze kwafika ngo-1871, lapho kwakhiwa i-Yellowstone National Park e-Wyoming, lapho kwazalwa khona ngokusemthethweni ipaki kazwelonke yokuqala. Ngokwesibonelo, i-Yosemite Park yadalwa ngo-1890, ezweni elifanayo ne-United States.
EYurophu, umqondo wamapaki kazwelonke awuzange uqale ukusetshenziswa kwaze kwaba ngo-1909, lapho iSweden ishaya umthetho ovumela ukuvikelwa kwezindawo ezinkulu eziyisishiyagalolunye zemvelo. ISpain izokweseka ukusungulwa kweziqiwu kazwelonke futhi ngo-1918 yakha ipaki yayo yokuqala kazwelonke, i-European Mountains National Park.
Njengamanje wonke umuntu ucacile ngokuthi ayini amapaki nokuthi iyini imisebenzi yawo, kunezindawo zokulondoloza imvelo, eziseLatin America ezithatha cishe ingxenye yesine yendawo, njengeMaya Biosphere Reserve eGuatemala, ngisho nePegaso e-Argentina Rito Moreno Glacier National. Ipaki.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi iyini ipaki, izici zayo nokubaluleka kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » Iyini ipaki yesizwe